Candy · Desambra 2012 · Global Voices teny Malagasy
Candy · Desambra, 2012
Lahatsoratra farany an'i Candy tamin'ny Desambra, 2012
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana28 Desambra 2012
Gaga sady faly ireo Yemenis omaly naheno ny momba ireo fanapahan-kevi-dehibe noraisin'ny Filoha Abd-Rabbu Mansour Hadi mba hanambatra ny tafika - ary hanala ireo havan'ny filoha teo aloha Ali Abdullah Saleh, izay nitàna toerana ambony tamin'ny tafika sy ny fiarovana. Am-pitandremana ihany no hanehoan'ny mpampiasa aterineto hevitra, ary ny sasany...
Roa taona lasa izay, nanomboka ilay antsoina hoe "Lohataona Arabo" rehefa nisy Toniziana mpitandro filaminana iray namelaka tovolahy tany Sidi Bouzid. Nihevitra ny olona fa ho foana vetivety ny tsindry hazolena ataon'ny mpitandro filaminana, nefa nisy lahatsary iray indray niparitaka tany Bahrain mba hanmpahatsiahy antsika fa mbola velona sy tomady...
Azia Atsimo28 Desambra 2012
Azia Atsimo23 Desambra 2012
Kim Kardashian, Baomba Mandatsa-dranomaso Ary Milkshake any Bahrain
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana03 Desambra 2012
Tany Bahrain i Kim Kardashian hanokatra ny fivarotany "milkshake". Nanohitra ny fitsidihany ireo Salafista "extremistes" - ary naparitaky ny mpitandro filaminana.
Azia Atsinanana03 Desambra 2012
Ny andro faran'ny Praiminisitra Sinoa Wen Jiabo tao am-pitondràna dia rakotra tsaho fa nampiasa ny heriny sy ireo fifandraisany akaiky ny fianakaviany mba hanangonan-karena ho azy manokana. Nahatonga ireo Sinoa mpampiasa aterineto hiresaka momba ny korontana anatiny misy ao amin'ny Antoko Kaominista koa izany tranga izany.